Tuesday 11 Jestha, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	ब्लग	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / ब्लग / यो गाउँको हैजा अरुतिरै लैजा…
यो गाउँको हैजा अरुतिरै लैजा…	17 Jul 2013 बुधबार २ श्रावण, २०७०
बीपीको ब्यानरमा खुमबहादुरको स्वागत (फोटो फिचर) भ्रष्टाचारी खुमबहादुर जेलबाट छुटे, कसरी भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए खड्का? टर्किस भदौ १६ बाट नेपाल आउने इमर्जिङलाई बन्द प्रशिक्षण सुरु पञ्चेश्वरका लागि ३५ करोड बजेट माग भौगोलिक भाषामा साउने संक्रान्तिलाई कर्कट क्रान्ति भने पनि खासगरी गाउँघरतिर लुतो फाल्ने दिन भनेर चिनिन्छ। 'एउटा गाउँको लुतो अर्को गाउँमा लैजा' भनेर रात परेपछि ठूलो स्वरले करायो भने त्यो गाउँका मानिसलाई वर्षभरी लुतो लाग्दैन भन्ने जनविश्वास छ।
सानो हुँदा हामीलाई यो पर्वको खुवै चासो रहन्थ्यो। त्यसैले लुतो फाल्ने दिनको प्रतीक्षामा रहन्थ्यौं। प्राय गाउँमा मध्य असारदेखि खेत रोपाइँ सुरु हुने भएकोले स्कुलमा बर्खे बिदा हुन्थ्यो । सक्ने ठूलाहरु बिदा भरी खेतमा काम गर्थे हामी साना केटाकेटी भने गोरु र बाख्रा चराउन खट्टिन्थ्यौँ ।
हामी तीन भाइ (दुई दाइ) ले दुई हल गोरु र लगभग ५० वटा बाख्रालाई दिनभरी पहरा दिन्थे। जता जता गोरु र बाख्रा जान्थे हामी त्यतै।बर्खा मास आँप पाक्ने मौसम भएर पनि होला हामी गोठालो जाने भनेपछि मख्ख पर्थ्यौ। उसो त गोठालो गएपछि पढ्ने टन्टा पनि हुन्नथ्यो। गाइबाख्रा फुकाएर वन पुर्‍याएपछि हाम्रो काम भनेकै आँपको रुख हेर्दै हिँड्ने। कुन रुखमा आँप पाकेको छ, कुनमा कति फलेको छ? यसरी रुखको टुप्पो हेर्दै हिँड्दा कतिचोटी लडेर घुँडामा घाउ समेत लाग्थे।
फलफूल खाने धोकोलाई पोको पारेर बसेका हामी आजैको दिन देखि धित मर्ने गरी फलफूल खान पाइन्छ भनेर चाँडै नै खाना खाइवरी गाइबाख्रा फुकाएर वन छिर्थ्यौ। वनमा पुगेपछि तीन जनाले लुतो फाल्न चाहिने कुकर डाइनो, पानी सरो, भलायोको पात, अनि सुकेको पातीको सिठो खोज्न व्यस्त हुन्थ्यौँ।
लुतो फाल्ने भएर होला हामीले घरमा चाँडै गाइबाख्रा लगे पनि गाली खादैनथ्यौँ यो दिन। गोठालोबाट घर फर्केपछि खाजा खाइवरी फेरी हाम्रो काम भनेको बारीमा भएजति फलफूलको जोडी खोज्ने काम सुरु हुन्थ्यो ।
लुतो फालेर साँच्चै हैजा जाने हो हैन अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन तर पनि आफ्नो गाउँघरतिरको यो चलन अहिले हराउँदै गएको छ। साउने संक्रान्तिको दिन घरमा फोन गरेको हजुरबाले लुतो फाल्नको लागि सबै तयार पार्नु भएको रहेछ । एक्कासी लाग्यो : अब घर गएको बेला सबैखाले फलफूल खान पाइन्छ। Tweet प्रतिक्रिया